समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्यो - Maxon Khabar
Home / News / समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्यो
समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्यो
२०७६ पुस ८ काठमाडौं - समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेको छ । उसका दुई मध्य उपेन्द्र यादव र मो. इस्तियाक राईले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाएका हुन् । उपप्रधान तथा कानूनमन्त्री यादवले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री ओलीले रोकेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र यादवबीच कुराकानी भएको थियो भने उपलब्ध पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो ।
लगतै संसदीय दलको बैठकले सरकार छाड्ने निर्णय गर्‍यो र दुबै मन्त्रीले राजीनामा बुझाएका छन । तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन नेकपा अध्यक्षद्धय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन गर्नेसहित दुईबुँदे सहमति गरेको थियो । तर नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता गरेर समाजवादी बनाए लगतै यादवमाथि सरकार छाड्न दबाव बढेको थियो । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समाजवादीका राज्यमन्त्रीलाई हटाउनुका साथै यादवको स्वास्थ्य मन्त्रालय खोसेर कानूनमा पुर्‍याइएको थियो ।
त्यसबेला पनि सरकार छाड्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यलयमा पुगेका समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले सरकार छाड्ने निर्णयलाई रिहर्सलको संख्या दिए । सञ्चारकर्मीहरुलाई छोटो प्रतिक्रिया दिएका उनले भने, ‘आज रिहल्सल मात्र हो, भोलि ड्रामा हुन्छ ।’ समाजादी पार्टीले भोलि बुधबार बिहान ११ बजे संघीय परिषदको बैठक बोलाएको छ । नेताहरुकाअनुसार भोलिको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय लिनेछ । यससँगै ओली सरकार दुई तिहाई रहने छैन ।